इज्जत त के, बरु ज्यान जाला नेपालीले रक्सी छोड्ने वाला छैन किनकि नेपालीहरू 'बहादुर' छन्
इज्जत त के, बरु ज्यान जाला नेपालीले रक्सी छोड्ने वाला छैन किनकि नेपालीहरू ‘बहादुर’ छन्
यूएई। यूएईमा कार्यरत प्राय सबै नेपालीलाई थाहा छ, यो देशमा सार्वजनिक रूपमा मदिरा सेवन गर्न पाइँदैन । दुबई, अबुधाबीलगायतका कतिपय राज्यहरूमा त मदिरा किन्न र पिउन पनि लासेन्स लिनु पर्छ । तर पनि नेपालीले नेपालदेखि लागेको बानी छोडेका छैनन् ।
नेपालमा शनिवार भने जस्तै यूएईमा शुक्रवारको दिन छुट्टीको दिन हो । शुक्रवारको दिन पारेर यो पहाड घुम्न जानु भो भने यूएईका सातै वटा राज्यमा काम गर्ने कयौँ नेपालीहरू भेटिन्छन् । उनीहरू प्राय पिकनिक खान उक्त पहाडमा पुग्ने गर्छन् । आफ्नै साधन हुने कतिपय नेपालीहरू त बिहीवार बेलुका नै पहाडमा गएर रात बिताउने गर्दछन् । र, जुमारात मनाउँछन् । ‘वीकेण्ड’ लाई अरबी भाषामा जुमेरात भनिन्छ ।
बरदुबईको पार्कमा बसेर बियर पिउने केटाकेटीहरूले कागजले बेरेर लुकाएर पिउने गरेको भेटिए । अलग अलग स्थानमा काम गर्ने र बस्ने उनीहरू शुक्रवारे छुट्टीको दिन सोही स्थानमा अङ्गालो मारेर मात्तिन्छन् । कतिपय त रूखको बुट्यान मुनि ‘खुलम खुला प्यार करेङ्गे हम, यस दुनियाँ से नही डरेङ्गे हम्’ शैलीमा अङ्गालो मारेर पिउँदै गरेका भेटिन्छन् । उनीहरूको क्रियाकलाप देखि नसक्नु हुन्छ । तपाईँले केही बोल्नु भयो कि पिटाइ खाई हाल्नु हुन्छ । कसैले ’डिस्टर्ब’ गरे झम्टिहाल्ने ।
सवारी दुर्घटनामा परी युएईमा ३५ नेपालीको मृत्यु
रक्षा बन्धन के हो थाहा छैन, भ्यालेन्टाइनको चुरीफुरी ?
मन्त्री पण्डितलाई प्रश्न : तस्करको क्विन्टल सुन पास हुने, श्रमिकको झिटी झाम्टोमा आँखा गाड्ने ?
खेल सकिएपछि नेपाली दर्शकले युएईमा स्टेडियम सफा गरेर मन जिते
रोजगारीको लागि साउदी गएकी नेपाली युवतीले दूताबासमै पाइन् बंगाली ड्राइभरको छोरा
अस्ट्रेलियामा पानीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै, फेरी अर्का नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
निर्दोष यी नेपालीहरु, जसले साउदी जेलमा ८ बर्ष नारकिय जीवन बिताए, भन्छन्: ‘धन्न, काटिन लेखेको रहेनछ !’
छोरी जन्माएकी प्रमिलाको खुसीयाली मनाउने तयारी एक्कासी लुटियो